လျှံထွက်နေတဲ့ အတွင်းသားလေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေကို ညို့ယူလိုက်တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
လျှံထွက်နေတဲ့ အတွင်းသားလေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေကို ညို့ယူလိုက်တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယိုလေး
သွယ်လျ ကျစ်လစ် လှပ လွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှ နဲ့ အတူ မို့မောက် ပြည့်တင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ကို ပရိသတ်တွေ သိကြမယ် ထင် ပါတယ် နော်..။ ဆက်ဆီ ကျကျ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဖမ်းစားနိုင်သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် ပုရိသ တွေ တွေ ဝန်းရံမှု ကို ရရှိ ထားသူ လေးဖြစ်ပါ တယ်..။ သူမ ကတော့ လှပ ကြည်လင် တဲ့ အသားအရေ လေး နဲ့ ကော်ပတ် ရုပ်လေးလို ချစ်စဖွယ် မျက်နှာလေး ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူလေး လည်းဖြစ် ပါ တယ်..။
သူမ ရဲ့ အမိုက် စားပုံရိပ် နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ tiktok ဗီဒီယို လေး ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ ပရိသတ် တွေ ရိုးအီ မသွားရအောင် အသစ် အဆန်းလေး တွေ မကြာခန ချပြ လေ့ရှိတာလည်း တွေ့ရပါ တယ်..။ ဒီနေ့ မှာတော့ စကပ် တိုတိုလေး ဝတ်ကာ အလန်းစား ပုံရိပ်လေး တွေကို “အလို လိုက်ပေးမယ့် ကိုကို ၁ယောက်လောက် !! ❣️”ဆို တဲ့ ကပ်ရှင်လေးနဲ့ အတူ ချပြ လာခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ချိုဇင်ရဲ့ ညို့ချက် ပြင်းပြင်း ဗီဒီယို နဲ့အတူ အလန်းစား ပုံရိပ် လေးတွေ ကိုပါ ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ရပါတယ် နော်..။
ပုံလေး ထဲမှာ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လှရက် လွန်းနေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။ချစ် ပရိသတ် ကြီး လည်း ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေး ကို ကျေနပ် သဘော ကျမယ် ထင်ပါ တယ်နော်..။ နောက်ထပ် လည်း အသစ် အသစ်လေး တွေ နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးဦး မှာ မို့ Pageလေးကို like&Follow လေး လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့ နော်…။
သြယ္လ် က်စ္လစ္ လွပ လြန္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလွ နဲ႔ အတူ မို႔ေမာက္ ျပည့္တင္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ ခ်ိဳဇင္ဝင္းျပည့္ ကို ပရိသတ္ေတြ သိၾကမယ္ ထင္ ပါတယ္ ေနာ္..။ ဆက္ဆီ က်က် ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဖမ္းစားနိုင္သူေလး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပုရိသ ေတြ ေတြ ဝန္းရံမႈ ကို ရရွိ ထားသူ ေလးျဖစ္ပါ တယ္..။ သူမ ကေတာ့ လွပ ၾကည္လင္ တဲ့ အသားအေရ ေလး နဲ႔ ေကာ္ပတ္ ႐ုပ္ေလးလို ခ်စ္စဖြယ္ မ်က္ႏွာေလး ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးသူေလး လည္းျဖစ္ ပါ တယ္..။
သူမ ရဲ့ အမိုက္ စားပုံရိပ္ နဲ႔ ဆက္ဆီ က်က် tiktok ဗီဒီယို ေလး ကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာမွာ ပရိသတ္ ေတြ ရိုးအီ မသြားရေအာင္ အသစ္ အဆန္းေလး ေတြ မၾကာခန ခ်ၿပ ေလ့ရွိတာလည္း ေတြ႕ရပါ တယ္..။ ဒီေန႔ မွာေတာ့ စကပ္ တိုတိုေလး ဝတ္ကာ အလန္းစား ပုံရိပ္ေလး ေတြကို “အလို လိုက္ေပးမယ့္ ကိုကို ၁ေယာက္ေလာက္ !! ❣️”ဆို တဲ့ ကပ္ရွင္ေလးနဲ႔ အတူ ခ်ၿပ လာခဲ့တာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ခ်ိဳဇင္ရဲ့ ညိဳ႕ခ်က္ ျပင္းျပင္း ဗီဒီယို နဲ႔အတူ အလန္းစား ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကိုပါ ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပးလိုက္ ရပါတယ္ ေနာ္..။
ပုံေလး ထဲမွာ ခ်ိဳဇင္ဝင္းျပည့္ တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လွရက္ လြန္းေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္..။ခ်စ္ ပရိသတ္ ႀကီး လည္း ခ်ိဳဇင္ဝင္းျပည့္ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံေလး ကို ေက်နပ္ သေဘာ က်မယ္ ထင္ပါ တယ္ေနာ္..။ ေနာက္ထပ္ လည္း အသစ္ အသစ္ေလး ေတြ ေန႔စဥ္ တင္ဆက္ေပးဦး မွာ မို႔ Pageေလးကို like&Follow ေလး လုပ္ထားဖို႔ မေမ့နဲ႔ ေနာ္…။
Previous post အခါခါ ပြန်ကြည့်ချင်လောက်အောင် ကို အသည်းယားစရာကောင်းတဲ့ အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ ပုံလေးတွေ
Next post အကိတ်ရွှေရင်အစုံကို တုန်ခါနေအောင် လှုပ်ခါဆော့ကစားပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖူးပွင့်ခိုင်ရဲ့ စပယ်ရှယ် ဗီဒီယို